Kuratidza zvinyorwa neelebheri kufanotaura
Orange 3 & Kufungidzira
Inoratidza kufembera kwemuenzaniso pane data. Inputs Dhata: dhairekitori dhairekisheni Vafungiri: vanofanotaura kuzoshandiswa mu dataOutputs Kufanotaura: data ine fungidziro yakawedzerwa Yekuongororwa mhedzisiro: kuiswa kweiyo algorithm yekuongororwa mhedzisiroWidget inogamuchira seti yedata uye imwe kana yakawanda yevanofungidzira (mienzaniso yekufungidzira, kwete kudzidza algorithms - ona muenzaniso pazasi). Inogadzira data uye kufanotaura.
Ruzivo rwekupinza, iyo iri nhamba yemhosva dzinofanirwa kufanotaurwa, nhamba yevanofungidzira nebasa racho (kutsaurwa kana kuderedzwa). Kana iwe ukarongedza tafura yedatha nehunhu uye uchida kuwona iyo yekutanga maonero, pinda Dzosera kurongeka kwepakutanga .Ungasarudza sarudzo dzekupatsanura. Kana fungidzira kirasi inoongororwa, iwo maonero anopa ruzivo nezvekirasi inotarisirwa. Kana akaongorora Anofungidzirwa mikana ye , iyo maonero inopa ruzivo nezve zvingangoitika zvakafungidzirwa nevechikoro. Iwe unogona zvakare kusarudza iyo inofungidzirwa kirasi inoratidzwa mumaonero. Sarudzo Dhirowa magidhi ekugovera inopa kutaridzika kwechokwadi…